घण्टीको मूल्य (बाल लघुकथा) | मझेरी डट कम
एक दिन सबै भैंसीहरू घण्टी हल्लाउदै हरियो चौरमा चरिरहेका थिए । हरिप्रसाद रुखको ओझेलमा बसेर सुसेली बजाउँदै थियो । यत्तिकैमा एउटा बटुवाले हरिप्रसादलाई बोलाउँदै झस्काइदियो । बटुवा चिल्लो भैंसीको घण्टी देखेर लोभिएको रहेछ ।
"त्यो घण्टीको मूल्य कति हो ? म किन्छु," बटुवाले प्रश्न गर्यो ।
"पचास रुपियाँ ," हरिप्रसादले जवाफ फर्कायो ।
"मात्र पचास ? म तिमीलाई यो घण्टीको सय रुपयाँ दिन्छु," बटुवाले भन्यो ।
सय रुपैयाँको सुनेर हरिप्रसाद निकै खुशी भयो र तुरुन्त घण्टी निकालेर बटुवालाई दियो अनि पैसा आफ्नो गोजीमा राख्यो ।
अब त्यो भैंसीको घाटीमा कुनै घण्टी थिएन । घण्टीको आवाजले हरिप्रसादलाई थाहा हुन्थ्यो, कि भैंसी कहाँ चरिरहेको छ । एकै छिनमा भैंसी चर्दै चर्दै धेरै टाढा पुगिसकेछ । त्यसै मौकाको फाइदा उठाउदै त्यही बटुवाले भैंसीलाई लिएर हिडिरहेको पो रहेछ ।
हरिप्रसाद रुँदै रुँदै घर आयो र सबै घटना बुवालाई सुनायो, "मलाई कत्ति पनि अनुमान थिएन कि घण्टीको मूल्य यति धेरै दिन्छ भनेर, मलाई ठग्यो भनेर ।"
बुवाले भने, "ठगीको सुख धेरै खतरनाक हुन्छ । सुरुमा त हामीलाई खुशी दिन्छ, पछि धेरै दुख । तसर्थ हामीले पहिले नै सुख खुशी लिनु हुँदैन । लोभ लालचमा फँसेर मानिसलाई कहिल्यै सुख मिल्दैन ।"
कहिले घाम​ कहिले शित्त​ल​ खोजिन्छ​